Filashada iibka ee 'AirPods Max' waxay kafiicnaan doontaa filashooyinka Guul darada? | Waxaan ka socdaa mac
Filashada iibka ee 'AirPods Max' waxay kafiicnaan doontaa filashooyinka. Guul darada?
Apple waxaa soo food saaray dhibaato ka timaadda iibka liita ee la filayo in AirPods Max uu yeesho. Falanqeeyaha Ming-Chi Kuo wuxuu ka digayaa inay u badan tahay in waqtiga la bilaabayo AirPods 3 inuu go'aan ka gaari doono inuu suuqa ka baabi'inayo nooca labaad ee nuucaas ah ama inuu sii wado tan iyo markii la iibiyay nooca kale ee AirPods. , kuwa Max, ma ahan kuwo la kulmaya rajooyinka iibka
Falanqeeyaha Apple Ming-Chi Kuo wuxuu ku aasaasay warbixin cusub, wax aan horey kuugu sheegnay oo ku saabsan nooca saddexaad ee AirPods. Wax soo saar badan Ma bilaabmi doono illaa rubuca saddexaad ee 2021. Hadda, lama oga haddii shirkadda Californian ay joojin doonto AirPods 2 markii la bilaabay, ilaa Kuo wuxuu u arkaa dhibaatooyin ku saabsan noocyada guud ee Apple ee AirPods, oo ay ku jiraan kuwa dhowaan la sii daayay ee Airpods Max.
Marka la eego isku dhafka wax soo saarka, waxaan saadaalineynaa in shixnadaha AirPods 2 ay aad hoos ugu dhici doonaan ilaa 3 milyan oo unug 3Q21 (oo ka soo horjeedda 12 milyan oo cutub oo 3Q20 ah). Waxaan aaminsanahay kala-guurka badeecada inay tahay sababta ugu weyn ee hoos u dhaca rarka AirPods 2. Waxaan aaminsanahay inay wali adag tahay in la ogaado in AirPods 2 ay soo afjari doonto wax soo saarka kadib markii AirPods 3 ay galaan wax soo saar ballaaran. Haddii AirPods 2 uu gaari doono dhamaadka nolosha wax soo saarka ballaaran ee AirPods 3 waxaan qiyaaseynaa in AirPods 3, AirPods Pro, AirPods 2 iyo AirPods Max ay xisaabtami doonaan qiyaastii 40%, 28%, 31% iyo 1% ee wadarta rarka, siday u kala horreeyaan, 2021.
Si fiican baad u aqrisay. Kuo wuxuu rajeynayaa AirPods Max inuu xisaabtamo ugu badnaan 1% dhammaan iibka AirPods ee 2021. Wuxuuna arkayaa guud ahaan kala duwanaanshaha ka yaraanaya tartamada kuwa qiimaha hoose ku tartamaya. Sidaa awgeed ka Apple waa inuusan ku faraxsanayn tirooyinkan. Saas ma aha waa in dib looga fikiro haddii ay khalad sameeyeen tiro badan oo alaabtan soo saaray. Marka lagu daro qaali iyo duugoobay walxaha qaarkood, waxaan leenahay dhibaatooyinka uumiga
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Filashada iibka ee 'AirPods Max' waxay kafiicnaan doontaa filashooyinka. Guul darada?
Xirashada Apple ayaa sii wadi doonta inay xukumaan suuqa 2021
Ma arki karno AirPods 3 illaa xagaaga kadib